Sactivator.com dia ao amin'ny fanarahana 17 U.S.C. § 512 ary ny Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Izany no politika mba hamaly misy fandikan-dalàna Hitan'Andriamanitra ary handray mety fihetsika eo ambanin'ny Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ary hafa lalàna azo ampiharina fananana ara-tsaina.
Raha ny ara-nofo zon'ny mpamorona no nalefa tao amin'ny sactivator.com na raha misy rohy ny zon'ny mpamorona dia niverina ara-nofo amin'ny alalan'ny fikarohana sy ny tianao ity hafatra ity nesorina, tsy maintsy manome an-tsoratra amin'ny antsipirihany ny fifandraisana izay vaovao voatanisa ao amin'ny fizarana manaraka. Azafady mahafantatra fa ianao no ho mendrika ny fahasimbana (anisan'izany ny fandaniana sy ny mpisolo vava 'saram) Raha lainga momba vaovao voatanisa eo amin'ny toerana izay hanitsakitsaka amin'ny zon'ny mpamorona.
Izahay aloha milaza fa hifandray ny mpisolovava ho an'ny fanampiana ara-dalàna momba izany.
Ireto manaraka ireto singa Tsy maintsy hita ao amin'ny fandikan-dalàna fitakiana ny zon'ny mpamorona:
Omeo porofo ny nahazo olona manao zavatra amin'ny anaran'ny iray ny tompon'ny zo manokana izay voalaza fa hifanohitra.
Omeo ampy fifandraisana vaovao mba manorata anao.
Tsy maintsy manan-kery ihany koa dia ahitana ny adiresy mailaka.
Tsy maintsy mamantatra ao ampy tsipiriany ny zon'ny mpamorona asa nilaza fa efa hifanohitra ary anisan'izany ny fikarohana iray, fara fahakeliny teny ambanin'ny izay ny zavatra hita ao sactivator.com valin'ny fikarohana.
Ny fanambarana fa ny fitarainana antoko manana finoana ny finoana tsara izay mampiasa ny fanazavana ao amin'ny fomba nitaraina noho ny tsy nahazo ny zon'ny mpamorona tompon'ny, ny mpandraharaha, na ny lalàna.
Ny fanambarana dia ny vaovao ao amin'ny fampahafantarana ny marina, ary teny ambanin'ny sazy ny vavolombelona mandainga, fa ny fitarainana antoko dia nomena fahefana hanao zavatra amin'ny anaran'ny iray ny tompon'ny zo manokana izay voalaza fa hifanohitra.
Tsy maintsy ho nanao sonia ny nahazo olona mba hanao zavatra ho an'ny iray amin'ny tompon'ny zo manokana izay lazaina fa ho hifanohitra.
Alefaso ny fandikan-dalàna filazana!
Ling ny fitarainana ny antoko hafa toy ny Internet Service Provider tsy expedite ny fangatahanao ary mety hiafara amin'ny tara noraisin'ny noho ny fitarainana tsy araka ny tokony ho nalefa amin'ny firaketana.
Ataovy azo antoka Alohan'ny DMCA